सिनेमालाई अलविदा भन्न चाहन्थिन् पुष्पा फिल्मकी अभिनेत्री रश्मिका मन्डन्ना – Jagaran Nepal
सिनेमालाई अलविदा भन्न चाहन्थिन् पुष्पा फिल्मकी अभिनेत्री रश्मिका मन्डन्ना
Jagaran Nepal सोमबार, फाल्गुण ०२, २०७८
नेशनल क्रसको ट्याग पाएकी साउथ अभिनेत्री रश्मिका मन्डन्ना पुष्पाको फिल्मको सफलतापछि पछिल्लो समय दबदबामा छिन् । फिल्ममा उनले अभिनय गरेको ‘श्रीवाली’ पात्रले दर्शकको मनमा राज गरिरहेको छ । साउथका दिग्गज निर्देशकहरू बाहेक बलिउड फिल्म उद्योगका धेरै ठूला निर्देशकहरू रश्मिका मन्डन्नालाई मन पराउँछन्। तर एक समय यस्तो थियो जब रश्मिकाले फिल्मी संसारलाई अलविदा भन्नै लागेकी थिईन् ।
रश्मिका चर्चित अनुहार भएपनि पुष्पा फिल्मले उनलाई रातारात स्टार बनाएको छ । तर उनी यस ग्ल्यामर्सले भरिएको उद्योगलाई अलविदा भन्न चाहन्थिन् यो कुरा उनले आफैंले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा बताएकी थिइन् । रश्मिकाले आफ्नो पहिलो फिल्म ‘किरिक पार्टी’ रिलिजपछि मात्र फिल्म उद्योगलाई अलविदा भन्न लागेकी थिइन् । यो रहस्य उनले आफ्नो अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेकि हुन् । उनले भनिन्, – एक फिल्मपछि यो सिनेमा छोडेर बुबाको व्यवसायमा लाग्न लागेको थिएँ ।
एक अन्तर्वार्तामा उनलाई सोधिएको थियो कि तपाईले १९ वर्षको उमेरमा काम गर्न थाल्नुभयो, यो उमेरमा केटीहरु आफ्नो जीवनमा रमाइलो गर्छन् तर तपाई दिनरात मिहिनेत भन्नुहुन्थ्यो, त्यो बेला तपाईले के गर्नुभयो ? तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? यस प्रश्नको जवाफमा रश्मिकाले भनिन्, –म पनि आफ्नो जीवनको आनन्द लिन चाहन्थें, हो, मलाई गर्व छ कि मैले त्यो दिनमा यति धेरै काम गरें कि आज यो नतिजा पाएको छु । तर पहिले म सोच्थेँ कि हो ।
ठिकै छ र फिल्म गरेपछि मेरा आमाबुवाले पनि त्यही फिल्म नै गर, पछि फर्केर आउनु भनेका थिए तर सायद नियति यही थियो र दर्शकको मायाले मलाई यहीँ रोक्यो ।” यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि रश्मिकाले आफ्नो ब्याकअप प्लान पहिले नै बनाइसकेकी छिन् । फिल्ममा सफल नभएको भए उनले बुवाको व्यवसाय सम्हाल्ने भएकी हुन् । र आज उनी फिल्म ‘पुष्पा’की अभिनेत्री मात्र छैनन् आज उनी ठूला अभिनेत्रीको सुचीमा परेकी छिन् र उनले नेशनल क्रसको उपाधि पनि पाएकी छिन् ।
उनको हँसिलो अनुहार फ्यानका लागि खुशीको स्रोत बनेको छ । यसअघि उनी साउथ फिल्म उद्योगको मुटुको धड्कन मात्र हुन् । तर फिल्म ‘पुष्पा’ रिलिज भएपछि उनी पनि बलिउडको प्राण बनेकी छिन् । उनलाई बलिउड फिल्मबाट अफर पनि आएको छ, जसमध्ये उनी सिद्धार्थ मल्होत्रासँग ‘मिशन मजनू’ मा स्क्रिन सेयर गर्दै देखिनेछिन् भने अर्को ‘गुडबाय’ मा अमिताभ बच्चनसँग देखिने छिन् ।